Eyona Koogeek ngezaphulelo kwiAmazon | Iindaba zeGajethi
IKoogeek yenza inkqubela phambili enkulu kwintengiso. Luphawu olunoluhlu olubanzi lweemveliso zekhaya elinobuhlakani, ukongeza kwimpilo. Ke ngeemveliso zakho, ubomi babasebenzisi bulula kwaye bukhululekile. Rhoqo, uphawu lunikezela uthotho lwezaphulelo kwiimveliso zalo.
Kule meko basishiya ngokhetho lwabo Iimveliso ezinesaphulelo kwiAmazon. Ukongeza kwiimveliso zeKoogeek, sikwafumana iimveliso zentengiso zedodocool. Uthotho lweemveliso ubomi bakho buya kuba lula.
1 IKoogeek Wi-Fi Smart Power Strip
2 IKogegeek LED Strip Lighting
3 IKoogeek Lampholder E27
4 Isikali seKoogeek
5 isixhobo dodocool Hub USB C
6 I-Dodocool - Isithethi esincinci seBluetooth
IKoogeek Wi-Fi Smart Power Strip
Umtya oneendawo ezine zokuthengisa zizonke onokuxhuma ngayo zonke iintlobo zezixhobo kuyo. Uncedo olusinika lona kukuba yonke into esiyiqhagamshela kulo mtya, siya kuba nakho ukuyilawula kude. Ke sinokwenza ukuba ivule okanye icime nanini na xa sifuna. Kulunge kakhulu ukusebenzisa kunye nolawulo, enkosi kwi-app yeKoogeek, ye-iOS kunye ne-Android. Ke, ngaphandle kokubakho ekhaya ungayenza icime okanye icime.
Ikwasivumela ukuba senze inkqubo yokuqalisa kwemveliso. Ke ukuba unomenzi wekofu oxhunyiwe, ungayenza ukuba ivule okanye iqale amanzi abilayo kwenye imveliso. Ke uhamba umgama omde xa kuziwa ekuthwaleni eminye imisebenzi ejikeleze indlu yakho. Unokufumana okuninzi kuyo.
Enkosi kule ntengiso, iyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-26,99. Ukufumana isaphulelo kule mveliso, kuya kufuneka usebenzise ikhowudi yesaphulelo: OW2VXJGA esisebenza kude kube nguJanuwari 31 kule meko kwaye sinqunyelwe kwiiyunithi ezingama-50.
IKogegeek LED Strip Lighting
Imveliso yesibini kuluhlu lolu ngumtya wokukhanyisa we-LED, esinika ithuba lokutshintsha ukukhanya kwemibala. Enkosi ngayo, sinokwenza imeko efanelekileyo. Ke ukuba sinesidlo sangokuhlwa, okanye sibukele imovie, sinokukhetha imibala kwaye senze isiphumo esifunekayo ngale ndlela. Ke singayisebenzisa kwiimeko ezininzi. Ukongeza, ezi zizibane ze-LED, ezinokusetyenziswa kwamandla okuphantsi.
Esi siqwengana seKoogeek sinokuba njalo ulawulo olukude ngalo lonke ixesha kusetyenziswa iapp. Iya kusivumela ukuba sitshintshe imibala ebonisiweyo, ukongeza kubungakanani bokukhanya. Sinokuphinda sisebenzise ukuba sifuna ukuba bavule ngaxa lithile. Ke ngoko, sinokubenza bavule nokuba asikho ekhaya.
Sifumana kwiAmazon ngexabiso lama-euro angama-28,59 kolu nyuso lukhethekileyo. Banokufumaneka ngeli xabiso ngenxa yekhowudi yesaphulelo RGMP8CRJ, enokusetyenziswa kude kube nguJanuwari 25. Akuncinci kwiiyunithi ezingama-50.
IKoogeek Lampholder E27
Imveliso enomdla esinokuyisebenzisa kunye neebhalbhu zokukhanya endlwini yethu. Ngombulelo kuyo, esinokuyisebenzisa kwizibane ekhaya, sinako ukulawula kakuhle ukusetyenziswa kwamandla kwezi zibane ekhaya. Ngapha koko, kunokwenzeka ukumisela xa ivula okanye icima, nokuba nakho ukulungelelanisa ubunzulu yokukhanya ngamaxesha onke. Ke siqwalasela yonke into ngendlela elula.
Ngale nto sinokusebenzisa usetyenziso, oluhambelana ne-Android kunye ne-iOS. Ke ukulawula esi sixhobo seKoogeek kulula ngokwenene. Ke, ukongeza ukucima okanye ukucima izibane ekhaya, Siya kuba nakho ukugcina kakhulu ekusebenziseni amandla, nto leyo efunwa ngabo bonke abasebenzisi.
Sifumene le mveliso kwiAmazon ngexabiso elikhethekileyo le-28,99 kolu nyuso. Kule meko iyafumaneka nge ukunyuswa kude kube nguJanuwari 31, apho ungasifumana khona isaphulelo usebenzisa le khowudi yesaphulelo: MMVS42CK. Akuncinci kwiiyunithi ezingama-50.
Isikali yinto yorhwebo kwizigidi zamakhaya kwihlabathi liphela. Isikali seKoogeek lukhetho olulungileyo olubonakala ngokuchaneka kwalo xa kulinganiswa. Ukongeza, ivumela ukuba sigcine idatha ngawo onke amaxesha asetyenzisiweyo. Ukuze umsebenzisi abenakho ukubona ukuvela kobunzima babo maxa onke, enkosi kuhlelo lokusebenza lokulawula isikali ngokwaso. Kukulungele ukuba ujonge ukunciphisa umzimba.
Unokuseta iinjongo kunye nesi sikali, ukuze ulawulo lwenziwe ukongeza ekuzameni ukufezekisa iinjongo ezithile ngazo ukunciphisa umzimba okanye ukuphila ubomi obusempilweni. Ngamafutshane, unokufumana okuninzi kuyo. Ukongeza, ine-WiFi kunye neBluetooth, evumela ukusetyenziswa okungcono kunye nokuhambelana kwayo.
Simfumana kule ntengiso yeAmazon e Ixabiso le-45,99 euro, emele isaphulelo sama-euro angama-20 kwixabiso lawo loqobo. Ukuba ufuna ukuyifumana ngeli xabiso likhethekileyo evenkileni, kuya kufuneka usebenzise le khowudi yesaphulelo i-SA3T7VAF ekhoyo kude kube nge-31 kaJanuwari. Ungayivumeli ukuba ibaleke ukuba kukho iiyunithi ezingama-50 kuphela.
isixhobo dodocool Hub USB C
I-USB Hub esivumela ukuba sidibanise zonke iintlobo zezixhobo ngokufanayo ngaphandle kwengxaki. Ke unokuqhagamshela i-smartphone yakho okanye ikhompyuter yakho kule hub yohlobo. Inketho efanelekileyo ukuba unamazibuko ambalwa kwaye kufuneka usebenzise ngaphezulu. Iya kukunika oku kunokwenzeka ngaphandle kwengxaki.
Ukongeza, iyabonakala ukuba iyahambelana nazo zonke iintlobo zezixhobo. Ayinamsebenzi nokuba usebenzisa oluphi uphawu, kukho izibuko le-USB kule hub eliza kuhambelana nayo nayiphi na into onayo. Into eyenza ukuba ibe yimveliso ebalulekileyo, Ukongeza apho uya kuba nakho ukuthatha ithuba kwiimeko ezininzi.
Simfumene kolu nyuselo kwiAmazon kwi Ixabiso elikhethekileyo lama-euro angama-8,99. Ukuze uyifumane ngeli xabiso, kuya kufuneka usebenzise ikhowudi yesaphulelo ye-AJHFF827 ekhoyo kude kube nguJanuwari 30. Kukho iiyunithi ezingama-50.
I-Dodocool - Isithethi esincinci seBluetooth
Ekugqibeleni, Sifumana isithethi esincinci sophawu. Olukhetho olukhulu esinokulisebenzisa kunye nekhompyuter okanye nefowuni yethu ngaphandle kwengxaki. Kuba isebenza ngeBluetooth, eyenza kube lula kakhulu ukungqamanisa nezinye izixhobo esinazo.
Ngale ndlela, sinokumamela umculo kuyo, okanye unomathotholo ngaphandle kwengxaki. Inomgangatho olungileyo wokumamela, eyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo malunga noku. Kuyenzeka ukuba uyisebenzise njengefowuni engenazandla. Iyahambelana noninzi lweemodeli, ke awuyi kuba neengxaki.
IAmazon iyishiya kuthi Ixabiso elikhethekileyo lama-euro angama-7,99 kukhuthazo lilinganiselwe kwiiyunithi ezingama-50. Uya kufumaneka de kube nguJanuwari 31 xa unyuselwa okoko nje usebenzisa le khowudi yesaphulelo i-NWU2QZ8U ifumaneka kulo msitho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Amazon » Esona saphulelo kwiimveliso zeKoogeek kwiAmazon